Wasiirka Amniga oo ka hadlay baaritaankii lagu sameeyay guriga Senator Qeybdiid – STAR FM SOMALIA
Wasiirka Wasaaradda Amniga dowladda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in dowladda ay sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga u horkeeni doonto cidii ka dambeysay falkii ka dhacay guriga Senator Cabdi Xasan Cawaale” Qeybdiid”,
Maxamed Abukar Islow Wasiirka Amniga ayaa sheegay in baaris deg deg ah ay sameyn doonaan. “Ciddii ka danbeysay falka ka dhacay Guriga Senator Cabdi Qeybdiid sharciga ayaa la horkeeni doonaa, sida ugu dhaqsiyaha badan.”
Gelitaanka iyo Baaritaanka lagu sameeyay mid kamid ah guryaha Senator Qeybdiid ayuu ku tilmaamay mid sharci darro ah waxana uu amray in baaritaan deg-deg ah lagu sameeyo.
Ciidamada weeraray ayaa la sheegay in ay yihiin ciidamo ay tababartay dowladda Imaaraadka Carabta oo Muqdisho ka howlgalla.
Dowladda Soomaaliya ayaa horay loogu wareejiyay ciidamada ay tababartay dowladda Imaaraadka oo ka tirsan Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Farmaajo oo amray in la baaro ciddii weerartay hoyga Cabdi Qaybdiid